Shir looga hadlayo dib u dhiska wadooyinka dalka ayaa kafurmay Muqdisho - Ministry of Public Works - Wasaaradda Hawlaha Guud
Shir looga hadlayo dib u…
Muqdisho, 10, 02 2020: Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u dhiska iyo Guriyeynta XFS Mudane Jamaal Xasan Ismaaciil ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray shir muhiim ah oo u dhexeeya Wasaaradda Hawlaha Guud DFS, Wasaaradaha Hawlaha Guud ee Maamul Goboleedyada Dalka & Bangiga Horumarinta Afrika.
Shirkan ayaa looga doodayaa waxyaabaha ka qabsoomay mashruuca dib u dhiska waddooyinka isku xira gobolada dalka (Road Infrastructure Program RIP) oo lagu dhisayo ilaa afar Waddo oo isku xira gobolada Dalka.
Wasiir jamaal Xasan Ismaaciil ayaa ugu horayntii kudheeraaday muhiimadda uu mashruucan u leeyahay dalka isagoona kasoo qayb galayaasha shirka ku ammaanay dadaalkooda sidii ay uga mira dhalin lahaayeen mashruucan.
Xubnaha Kaqayb galayaasha shirka ee Wasaaradda Hawlaha Guud, Bangiga Horumarinta Afrika & Wasaaradaha Hawlaha Guud ee Maamul goboleedyada ayaa kadooday caqabadaha jira iyo sidii looga gudbi lahaa.
Shirkan ayaa socondoona muddo saddex ah maalmood ah gabagabadiisana waxaa laga soosaari doonaa war murtiyeed.
Category: NewsBy IT Department February 11, 2020
PreviousPrevious post:Shirka Wadatashiga Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Bangiga Horumarinta Afrika ayaa lasoo gabagabeeyayNextNext post:Xayeysiis: Wasaaradda Hawlaha Guud ee Soomaaliya waxay danaynasaa 2 lataliye oo dhanka sharciga ah ( 2 legal experts consultants)